Ny ho avy no jerena, fa tsy ny lasa… | NewsMada
Sao tsy mifankahazo ny resaka? Na mampihazohazo… Tsy ny hamoha ny lasa hoe fohazina hijerena sy hiaraha-mitsara ny fifidianana, fa ny hamoha ny ho avy mila vohaina hitondra fiovana sy fanovana. Amin’izany no handinihana sy hanapahan-kevitra amin’izay foto-kevitry ny kandidà hofidina, izay vinam-piarahamonina tiany hajoro, ny fandaharanasany hanatrarana izany, ny fomba fiasany hahombiazana…
Noho izany, tsy ny fitanisana ny lasa no inona; eny, na eo tokoa aza ny hoe: ny lasa no nahatonga ny anio, ary ny anio no handrafitra ny ampitso. Ho tafintohina izay fatra-piherikerika ny lasa, tsy hahita mazava izay diavina amin’izay fotoana izay ary hidona amin’ny rindrina amin’ny farany na amin’izay ho ampitso. Efa niaraha-nandia sy niaraha-nahita ny lasa, fa tsy hotanisaina lava.
Inona àry ny zava-dehibe sy maika ka mampikaikaika ny vahoaka ifotony amin’izao fotoana izao? Eo, ohatra, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fandrobana sy halatra tany, ny kolikoly mampisy ny kely tsy mba mamindro, ny famerenana ny hasin’ny fanjakana hisorohana ny fitsaram-bahoaka… Inona ny vahaolana azo antoka sy mahomby ary maharitra amin’ireny rehetra ireny?
Amin’izany, tsy ny fitanisana ny lasa no inona, fa izay hatao amin’ny ho avy. Ahoana koa no tsy hiverimberenan’ny krizy intsony, ny mba tsy hampahantra ny vahoaka intsony, ny mba tsy hisian’ny fanamparam-pahefana tsy fanarahan-dalàna intsony eo amin’ny mpitondra… ? Ny fanazavana izany no handresy lahatra ny mpifidy, fa tsy izay fanaratsiana ny mpifanandrina ny tena amin’ny fitanisana lava ny lasa.
Ny fandotoana ny hafa, tsy hampahadio ho azy ny tena; ny fanaratsiana ny hafa, tsy hahatsara endrika ho azy ny tena. Fifidianana no atao: tsy tsangan’olona no jerena,fa tsangan-kevitra sy tsangam-pandaharanasa… Miainga avy amin’izay ny asa, ary izay no tena andrasan’ny maro ka hitsarany ny tena. “Tsy mamafa ireo olana ny fifidianana”, hoy ny praiminisitra frantsay teo aloha izay, Jean-Pierre Raffarin.